ငါတို့မြို့ကြီးဖတ်ဖို့ စက်ဘီးအကြောင်း (၁) – Bikes in Ygn
ငါတို့မြို့ကြီးဖတ်ဖို့ စက်ဘီးအကြောင်း (၁)
Utility Cycling ကို /“ *သွားလာဖို့အတွက် စက်ဘီးစီးခြင်း* ”/ လို့ ကျွန်တော်ကတော့ ဘာသာပြန်လိုက်ပါတယ်။ Utility Cycling ကို Transportatinal Cycling လို့ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ ပိုမိုသင့်တော်တဲ့ ဘာသာပြန်ဆိုမှုများ ရှိပါက ထောက်ပြဝေဖန်နိုင်ပါတယ်။ အောက်စာပိုဒ်များမှာတော့ Utility Cycling လို့ပဲ ဆက်လက်ရေးသားအသုံးပြုသွားပါမယ်။
Utility Cycling ဆိုတာ စက်ဘီးကို မြို့တွင်း မြို့ပြင်သွားလာဖို့အတွက် စက်ဘီးစီးခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ Utility Cycling အပြင် နောက်ထက်စက်ဘီးစီးခြင်း နှစ်မျိုးရှိပါသေးတယ်။ အားကစားအနေနဲ့ စီးတာ (cycling for sport) နဲ့ အပျော်သဘော စက်ဘီးစီးတာ (cycling for leisure) တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရေးအားမှာတော့ ကျွန်တော်အဓိကတင်ပြမှာက Utility Cycling အကြာင်းဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ Utility Cycling ဆိုတာ ကမ္ဘပေါ်မှာ စက်ဘီးဆိုတာ စဖြစ်ပေါ်လာတည်းက စတင်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပြီး ယခုအထိလည်း စက်ဘီးစီးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးထဲမှာ သွားလာဆက်သွယ်ရေးအတွက် အသုံးပြုခြင်းက အဓိကနေရာမှာ ရပ်တည်လျက်ပါပဲ။ 
စက်ဘီးနဲ့ခရီးတိုသွားတာမျိုး၊ ၃ ကီလိုမီတာကနေ ၁၅ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးလောက် အတွင်း သိပ်မေဝးတဲ့အကွာအဝေးအတွက် အသုံးပြတာမျိုးတွေပေါ့။ ကျောင်းသွား ကျောင်းပြန်၊ အလုပ်သွား အလုပ်ပြန် နဲ့ မြို့ထဲမှာ ဟိုဟိုဒီဒီ စီးဘီးလေးနဲ့ သွားသွားလာလာ သွားတာမျိုးတွေ ပေါ့။ Yangon Door2Door လို စက်ဘီးနဲ့ ပစ္စည်းပို့ပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတွေကိုလည်း Utility Cycling ထဲထည့်လို့ရတယ်။
Utility Cycling က နေ့စဥ်ဘဝအတွက် လွယ်ကူအစဥ်ပြေစေရုံမဟုတ်ဘူး ငွေရေးကြေးရေးအရလည်း သက်သာစေတဲ့ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုပါ။ နိုင်ငံအသီးသီးမှာ အထူးသဖြင့် ဥေရာပနိုင်ငံများ (အထူးသဖြင့် အမ်စတာဒန်မြို့လေးမှာ) ဆိုရင် Utility Cycling ကြောင်း လူထုကျန်းမာရေးပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေလို့ဆိုပြီး Utility Cylcing ကို အားပေးဖို့အတွက် ပေါ်လီစီများ ချမှတ်ပြီး မြို့ပြမှာ စက်ဘီးစီးသူများ ပိုမို တိုးပွားလာစေရေးအတွက် အဖက်ဖက်မှ ပံ့ပိုကူညီမှုတွေ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတာတစ်ခုဆို သူတို့နိုင်ငံမှာ စက်ဘီးနဲ့ အလုပ်တက်သူတွေကို အပိုဆုကြေးလစာများ ထပ်စောင်းပေးတာမျိုးတွေပါရှိသတဲ့။  ကျွန်တော်တောင် ရုံးက အထက်လူကြီးကို ပြောပြလိုက်မိပါသေးတယ်။ Utility Cycling ကြောင့် တခြား အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းများစွာ ရတယ်လို့ General brochure about bicycle use and bicycle policy in the Netherlands စာတမ်းမှာ ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဘာတွေလည်းဆိုတာ အောက်မှာ ရှုပါဗျာ။
1. လူထုကျန်းမာရေးကော တစ်ဦးချင်းကျန်းမာရေးကော ပိုမိုကောင်းလာစေတယ်
3. မြို့ပြ လမ်းပိတ်မှုအခက်အခဲကို လျော့ကျစေတယ် (ရန်ကုန်မှာဆို အဲ့ဒုက္ခကတော်တော်ဆိုးသဗျ)
4. မြို့ပြလမ်းမများရဲ့ လုံခြုံစိတ်ချရမှုအရည်အသွေး ပိုမိုတိုးတက်လာစေတယ် (ဘယ်လို ဆက်စပ်မှုရှိတယ်ဆိုတာကို အလျင်းသင့်ရင် သင့်သလို ဆက်လက်ရေးသား တင်ပြသွားပါမယ်)
5. လေထုညစ်ညမ်းမှုလည်း လျော့ချပြီးသားဖြစ်တယ် (မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းရာရောက်သပေါ့)
6. လူမှုအဆင့်အတန်း ပိုမိုမြင့်မားလာစေတယ် (ဒီတစ်ချက်က အတော်ဟုတ်သဗျ။ ကမ္ဘာ့အပျော်ရွှင်ဆုံးနိုင်ငံတွေလို့ အများက သတ်မှတ်ထားကြတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာဆို လူတွေက စက်ဘီးကို မက်မက်စက်စက် စီးကြသတဲ့။ )
7. စက်ဘီးစီးတဲ့သူတွေများလာရင် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကြီးက လူတွေဟာ ပိုမျိုတက်ကြွပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ ပိုတိုးလာမယ်တဲ့ (အရှည်တွေးစ ကြည့်စရာပါပဲ)
8. ကလေးသူငယ်များရဲ့ ဖွံဖြိုးမှုကိုလည်း အထောက်အကူ ပြုပါသတဲ့
ကဲ အချက်တွေကတော့ အများကြီးပဲ။ အဲ့ထဲက အချက် ၆ နဲ့ ၇ ကို တော်တော် သဘောကျသဗျ။ မိတ်ဆွေတို့ရော ဘယ်အချက်တွေကို သဘောကျပါသလဲဗျ။
Utility Cycling နဲ့ပတ်သက်လို့ အချက်အလက်တစ်ချို့လည်း ကောက်နှုတ်ဖေါ်ပြချင်ပါတယ်၊၊ ရှုစားကြပါခင်ဗျာ။
၂၀၀၀ ခုနှစ်စစ်တမ်းများအရ ကမ္ဘာ့ လူ့သက်တမ်းအရှည်ဆုံနိုင်ငံတွေထဲမှာ အမြဲထိပ်နားက ပါဝင်တဲ့ ဂျပန်မှာ နေ့စဥ် စက်ဘီး အစီး သန်း ၈၀ ကို အသုံးပြုနေကြပါတယ်တဲ့။ ခရီးစဥ်အားလုံးရဲ့ ၁၇% ကို စက်ဘီးနဲ့ သွားကြပါသတဲ့။ ဂျပန်ဇာတ်ကားတွေ ကြည့်ရင် သတိထားမိနိုင်ကြပါတယ်။ ဂျပန်ထက်ပိုပြီး စက်ဘီးပိုစီးတဲ့နိုင်ငံက နယ်သာလန်နိုင်ငံပါ၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံမှာ ခရီးစဥ်အားလုံးရဲ့ ၂၇%အထိကို စက်ဘဲနဲ့ သွားလာကြပါသတဲ့။ အဲ့ဒီ့ နယ်သာလန်နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေက ကမ္ဘာမှာ အပျော်ဆုံးမြို့သူ မြို့သားတွေဖြစ်သတဲ့။ (စက်ဘီး စီးတာကြောင့် သူတို့ ပျော်ကြတာလား၊ ပျော်ကြလို့ သူတို့ စက်ဘီး စီးကြတာလားဆိုတာကတော့ စဥ်းစားစရာပဲနော်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ စက်ဘီးတွက ဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတာကတော့ အသေအခြာပါပဲနော့်)
1. Bicycle : The History [Bicycle: The History | Yale University Press](http://yalebooks.com/book/9780300120479/bicycle-history)
2. General brochure about bicycle use and bicycle policy in the Netherlands. [http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/CyclingintheNetherlands2009.pdf]
January 2, 2017 by ZwePyae	article